शुक्रकीट घट्ने क्रमबारे गम्भीर चिन्ता – जनस्वास्थ्य खबर
शुक्रकीट घट्ने क्रमबारे गम्भीर चिन्ता
बीबीसी नेपाली। उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र न्यूजिलण्डका पुरुषहरुको शुक्रकीटको संख्याको झन्डै दुई सय अध्ययनहरुको निष्कर्षको विश्लेषण गरेका अनुसन्धानकर्ताहरुले विगत ४० वर्षको अन्तरालमा पुरुषको शुक्राणुको संख्यामा आधाले कमी आएको हुनसक्ने बताएका छन्।
तर कतिपय विज्ञहरुले मानव प्रजनन् दरको पछिल्लो निस्कर्षप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।
प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. हागाइ लेभिनले पुरुषको शुक्रकीट घट्ने क्रमका कारण भविष्यमा के होला भनेर आफू “निकै चिन्तित” भएको बताए।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको नयाँ सोधका क्रममा सन् १९७३ देखि सन् २०११ सम्म गरिएका १८५ वटा अध्ययनका निस्कर्षको विश्लेषण गरिएको बताइएको छ।
एपिडिमिओलोजिस्ट समेत रहेका डाक्टर लेभिनले बीबीसीसँग भने अहिलेको क्रम जारी रहेका मानव जाति नै लोप हुन सक्छ।
“हामीले हाम्रो जीवन बाच्ने तौरतरिका, वातावरण र हामीले प्रयोग गर्ने रसायनबारे पुनर्विचार नगर्ने हो भने भविष्यमा के होला भनेर म निकै चिन्तित भएको छु।”हामीले हाम्रो जीवन बाच्ने तौरतरिका, वातावरण र हामीले प्रयोग गर्ने रसायनबारे पुनर्विचार नगर्ने हो भने भविष्यमा के होला भनेर म निकै चिन्तित भएको छु डा. हागाइ लेभिन, प्रमुख अनुसन्धानकर्ता, हिब्रु विश्वविद्यालय
“अन्ततोगत्वा हामीले प्रजनन् सम्बन्धी समस्याहरु भोग्नुपर्ने हुन सक्छ र त्यसले मानव प्रजातिलाई नै लोपको संघारमा पुर्‍याउन सक्छ।” तर सो अध्ययनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न नभएका वैज्ञानिकहरुले अध्ययनको गुणस्तरको प्रशंसा गरेका छन् तर त्यसैका आधारमा यस्तो निस्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएका छन्।
जेरुसलेमको हिब्रु विश्वविद्यालयका डाक्टर लेभिनले अध्ययनको क्रममा पुरुषहरुको शुक्राणुमा ५२.४%ले कमी आएको पत्ता लगाएका छन्। उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया र न्यूजिलण्डका पुरुषको कुल शुक्रकीटको संख्यामा ५९.३% ले कमी आएको पाइएको बताइएको छ।
त्यो अध्ययनका अनुसार ती देशका पुरुषको शुक्रकीटमा कमी आउने क्रम जारी छ र सम्भवत त्यो बढीरहेको हुन सक्छ।
अध्ययनका क्रममा दक्षिण अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका पुरुषका शुक्रकीटको संख्यामा कमी नआएको पाइएपनि ती महादेशमा पर्याप्त अध्ययन नभएको बताइएको छ। तर डाक्टर लेभिनको चिन्ता छ ती महादेशमा पनि पुरुषको शुक्रकीटको संख्यामा कमी आउने क्रम जारी रहन सक्छ।
कण्डमको विज्ञापनले विवादमा सनी
मुम्बई- भारतीय रियालिटी शो ‘बीग बोस’ हुँदै फिल्म ‘जिष्म २’बाट बलिउडमा छिरेकी इन्डो क्यानेडियन पूर्व पोर्नस्टार सनी लिअोन बलिउडमा प्रवेश गरेदेखि नै चर्चा र विवादमा आइरहेकी छन्। फिल्मी अभिनयसँगै समय–समयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने सनी यसपटक पुनः विवादमा तानिएकी छन्। हालै मात्र एक कण्डमको विज्ञापन गरेकी उन लाई सोही विज्ञापनले विवादमा ल्याएको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार विज्ञापनमाथि गोवाका नेता प्रान्सिस्को सिल्वेरियाले आपत्ति जनाएका छन्। उनले जुन किसिमले कण्डमको प्रचार गरिएको छ, त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। ती नेताले विज्ञापनका कारण आफूहरु लज्जित भएको बताएका छन्। ‘गोवा ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेशनको बसमा कण्डमको विज्ञापनको प्रचार भएको छ। यो विज्ञापनको पोष्टर बसमा पनि टाँसिएको छ,’उनले भनेका छन्,’यस्तो किसिमको विज्ञापनबाट हामी गोवाका मानिसहरुलाई के सिकाईरहेका छौं? बसमा विद्यार्थी पनि यात्रा गर्छन। यस्तो विज्ञापनबाट उनीहरुले के सिक्छन्। यस्तो विज्ञापनबाट गोवाका मानिसमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ।’
मैनफोर्स कण्डमको सद्भावना दुतसमेत रहेकी सनीले यही कण्डमको विज्ञापनमा अभिनय गर्दा विवाद बढेको हो। यसअघि यो कण्डमको विज्ञापनमा देखिएकी सनी त्यो समयमा पनि विवादमा तानिएकी थिइन्।
यसअघि रिपब्लिकन पार्टी अफ इण्डियाको महिला शाखाले पनि सनीको कण्डम विज्ञापनको विरोध गरेको थियो। उनीहरुले विज्ञापन हेरेर महिलाहरु लज्जित हुनुपरेको जनाएका छन्। आफ्नो विज्ञापनको विरोध भएपछि सनीले आफूले हस्ताक्षर गरेको ब्राण्डको विज्ञापन प्रति आफूले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको बताएकी छन्।
यस्तो रहेछ महिलाहरुको यौन सन्तुष्टिको राज
महिलाहरु यौनसम्पर्कको एक क्षणमा लगातार २० पटक चरम सुख (ओर्गेज्म) मा पुगेपछि मात्र सन्तुष्ट हुन्छन् । यसको खुलासा हालै बेलायती अखबार ‘मिरर’मा छापिएको एक रिपोर्टले गरेको हो ।
रिपोर्टको अनुसार अनुसन्धानमा दुई प्रतिशत महिलाहरु लगातार २० पटक चरम सुख प्राप्त गर्छन्, जब आठ प्रतिशत महिलाहरु लगातार १० पटक चरम सुखपछि सन्तुष्ट हुन्छन् । सेलिब्रेटी सेक्सुअल विशेषज्ञ डा डेल्विन र डा क्रिस्टीनी वेबरले यस विषयमा अनलाइन सर्वेक्षण गरेका थिए ।
उक्त सर्वेक्षणमा २० देखि २४ वर्षसम्मका कुल १२ सय ५० महिलाहरुले भाग लिएका थिए । सर्वेमा उनीहरुसँग यौनक्रियामा कामोत्तेजनाको बारेमा सोधिएको थियो । डा डेल्विनका अनुसार यौनसम्पर्कको बेला निकै कम पटक मात्र चरम सुखसम्म पुग्छ । तर अनुसन्धानको अनुसार लगभग ७० प्रतिशत महिलाहरु सेक्सका क्रममा केही पटक मात्र उक्त स्टेजमा पुगेको बताए ।
यौन सम्पर्कले महिलाको आयु बढाउने वैज्ञानिकको दावी
हप्ताको एकपटक यौन सम्पर्क गर्दा महिलाहरू दीर्घजीवी हुने तथ्यलाई हालै गरिएको एक अध्ययनले बाहिर ल्याएको छ । उक्त अध्ययनका अनुसार यौन सम्पर्कका कारण तनाव कम हुने र रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि हुने देखिएको छ ।
क्यालिफोर्निया विश्वविध्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गरेको उक्त अध्ययन अनुसार हप्तामा कम्तिमा पनि एकपटक यौन सम्पर्क गर्दा महिलाको आयु बढ्ने देखाएको हो । यौन सम्पर्कबाट टेलोमिरिज नामको हर्मोन वृद्धि हुने उक्त अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो । यो हर्मोनले डिएनए नाशलाई नियन्त्रण गर्ने हुनाले महिलाहरू दीर्घजीवी हुने अनुसन्धानकर्ताको दावी रहेको छ । यसबाहेक समग्र स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउने उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा शारीरिक निकटता, सम्बन्धबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि, यौन साथीबाट प्राप्त हुने सहयोग वा टकराव तथा तनावलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यौन सम्पर्कबाट हुने सन्तुष्टि वा असन्टुष्टिले टेलोमिरिज हर्मोनको आयुमा कुनै असर नपर्ने पत्ता लागेको थियो । त्यस्तै तनाव, साथीबाट प्राप्त हुने सहयोग वा टवरावले यो हर्मोनको जीवन चक्रमा कुनै असर नपर्ने पनि पत्ता लागेको थियो ।
नियमित यौन सम्पर्कको असर लोग्ने मानिसमा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे अनुसन्धानमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर नियमित यौन सम्पर्कले लोग्ने मानिसलाई घातक मुटु रोगबाट बचाउने तथ्यलाई वैज्ञानिकले पुष्टि गरिसकेका छन् । मानिसको रगतमा हुने होमोसिस्टिन नामको घातक रशायनलाई कम गर्ने यस अघिको अध्ययनले देखाइ सकेको छ । ताइवानका वैज्ञानिकले गरेको एक अनुसन्धानले यौन सम्पर्कबाट राम्रो रक्त सञ्चार हुने तथा रक्त नलीहरू मजवुत हुने पत्ता लागेको थियो ।